Izivakashi ezinesibindi kakhulu zichitha ihlobo ethempelini evamile lendwangu, kanti abanye bakhetha ukuyeka kwenye yezindawo zokuvakasha, ezishintsha ngokuphawulekayo. Lapha, akusiyo kuphela inkonzo esekhulile, kodwa futhi namanani. Amanani ngokwesilinganiso aguqukayo kusuka ku-1800-3500 ama-ruble ebusuku. Leli xabiso alibandakanyi ukudla nokuzijabulisa.
Izisekelo zokuzijabulisa zihlukaniswe ngezigaba eziningana:
1) Izikhungo zokuzilibazisa ezomnotho, lapho ungazitholela khona imali encane. Abavakashi bahlinzekwa ngezindlu ezincane ezinetafula lombhede nombhede. Indlu yokugezela kanye nokugeza kukhona esakhiweni. Ungadla egumbini lokudlela. Ukuzijabulisa kuhlinzekwa: i-table tennis, amabhilidididi, i-sauna, i-sauna enezibhamu zokubhukuda, i-cafe ehlobo, ama-barbecues, ukudoba, i-volleyball nezindawo zebhola.
2) Izikhungo zokuzilibazisa ezijwayelekile, lapha amanani aphezulu kakhulu, kepha ahlala emukelekile. Kulabo abahlala eholidini, ungakwazi ukuqasha indawo encane ephethe ikhishi elihlomeleyo, negumbi lokuphumula elinomabonakude, izinto ezibonakalayo phansi. Ungadla imali eyengeziwe kwi-cafe eseduzane. Ensimini kukhona ihholo lokuqeqesha, indawo yokushona ilanga, ibha, ichibi, amabhati, izindawo zemidlalo.
3) Izindlu ze-Vip-boarding ziyakhangwa nezinsiza zabo, kodwa zishaqeka ngamanani aphezulu. Abavakashi bangabhala izindlu ezinkulu zomndeni noma ama-cottages amabili. Endlini ngayinye, ngaphezu kwezinto ezidingekayo, kukhona isethi ye-TV, isikhungo somculo, i-DVD, ifriji, i-kettle kagesi, i-shower kanye ne-tableware yokukhonza itafula. Ukudla kukhonjelwa ekudleni. Futhi kukhokhelwa imali: igumbi lesigungu, i-cafe ehlobo emagqumeni aseVolga, indawo yokudlela yaseYurophu, i- sauna enamachibi okubhukuda, amabhilididi, ukuqasha isikebhe, i-jeep safari.
Ngokusho komunye wabadlali bezinsuku zokuphumula eSamara u-Alexei Titov, ngempelasonto asetshenziswe emabhishi aseVolga, uzobheka abantu abaningi abasha. "Saya kwesinye sezikhungo zezokuvakasha iVolga, nabangane emva komshado, ngesakhiwo sobusha, baqashe izindlu lapho, bephumula nje! Imenyu e-cafe i-chic, kunezitolo lapho ungathenga khona konke okudingayo! Sakha ama-shish kebabs endaweni ekhethiwe, okuyinto elula kakhulu. Kusukela ehostele kwakukhona ukubonakala okuhle, nakuba izimo zendlu zingekho kakhulu, kodwa uma kunamathuba ezezimali, ungakwazi ukuphumula emakamelweni akhululekile! "
Kwamanye amaSamaria, sekuyisikhathi eside sekuyisiko ukuhamba ukuze uhlale emazweni angaphandle. Muva nje, iholide phesheya lingaphupha kuphela, manje izinkampani zokuhamba zikhula njengama-mushroom futhi zithengisa izinhlinzeko ezingaphezulu kakhulu. U-Elena, isisebenzi senkampani yokuvakasha "i-Galla-tour" yasitshela ngokuthandwa kwabakhenkethi baseSamara: "Izindawo zokungcebeleka zaseGibhithe naseTurkey zisaziwa kakhulu. Lapha, le nsizakalo iyafaneleka, futhi uhlelo lohambo lwezokuvakasha luhlukile. " Okuthandwa kakhulu yizindawo zokugcina ngomzuzu wokugcina, zingathengwa ngesaphulelo esinzima. Isibonelo, isonto edolobheni elihle kunawo onke laseGibhithe Shar-el-Sheikh lababili lizobiza cishe u-22 000 ngomaki "konke okubandakanya". Lokhu kusho ukuthi izivakashi ezilambile ngeke zihlale. Amahhotela ahlinzeka ngezinkwa ezintathu noma ezine ngosuku nosuku ngaphandle kwemingcele kusukela ku-10 ukuya ku-22. Futhi emahoreni amaningi kukhona izinkambo zamahhala, imidlalo nezingane nezinye izinto zokuzijabulisa ezinezintambo. Ngenkathi ukhululeka emazweni angaphandle, ungaqhuba ulimi lwangaphandle futhi uthole abangane abavela emazweni ahlukene. Kuyafaneleka ukucabanga ngokuthola ipasipoti.
Noma yiliphi iholidi kufanele lisetshenziswe ngenzuzo, ukuthi kwakukhona isisindo sememo kusukela esikhathini esichithwe. Labo bantu abaluzisa induduzo kanye nekhwalithi badinga ukuhamba phesheya ngesibindi. Kodwa ama-patriots eqiniso, abathandi beRashiya, ukuzingela, ukudoba kufanele bahlolisise ukunikezwa kwezikhungo zokuvakasha ze-Volga bese bephumula ngaphansi kwelanga laseSamara.